Archive du 20200624
Depiote Razafitsiandraofa Jean Brunelle “ Aleo aho hijanona eny Tsimbazaza ihany”
Nohamafisin’ny depiote Razafitsiandraofa Jean Brunelle solombavambahoaka voafidy tany Ikongo V7V
Antoko Natiora “Tsy nofehezina mihitsy ny COVID 19 teto”
Efa nametraka hatrany am-boalohany ny antoko politika Natiora fa tsy misy na inona na inona antenainay amin’ity fitondrana ity, hoy ny filohany, Ni-Rencho-Mihari.
RMDM sy antenimierandoholona Nidinika momba ny lalàna mifehy ny mpanohitra
Nidinika momba ny lalàna mifehy ny mpanohitra amin’ny teo anivon’ny antenimierandoholona omaly ry zareo avy eo anivon’ny rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM.
Fahasalamana, sosialy, toekarena Tsy te hamoaka vola firy ny fitondrana…
Ny 14 jona lasa teo no nanapa-kevitra ny fanjakana tamin’ny alalan’ny Filoham-pirenena fa halefahana ny fepetra satria voafehy ny valanaretina, araka ny nambaran’i Andry Rajoelina.
Minisitry ny serasera Namaly bontana ny Antenimieran’ny Andriana
Hihemotra ny fitokanana ny asa fanarenana Ny Rova sy ny kianja Masoandro, hoy ny Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rtoa Lalatiana Andriatongarivo omaly.
Antenimierandoholona Nodimandry ny Senatera Vola
Nodimandry ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 10 ora alina teny amin’ny Hopitaly manara-penitra eny Andohatapaneka ny Senatera Razafindratovo Ravololonirina Émilie na I Senatera Vola,
Fetim-pirenena 26 jona Arahi-maso avokoa ireo toerana firevirevena
Araka ny efa voalaza dia eto Antananarivo renivohitra ihany no misy ny fanamarihana amim-pomba ofisialy ny fetim-pirenena 26 jona amin’ity taona ity.
Anthony Hampandroso ny baskety any Bongolava
Rotsiniaina Anthony na Rotsy, 19 taona, dia mpilalao ny taranja basikety avy any Bongolava.
Sady efa tsy misy “gél désinfectant” Miverina ny taingim-ben’ny taksibe
Maro ireo fepetra fiarovana sy fisorohana ny valanaretina tsy voahaja. Tena goragora tanteraka izany amin’izao fotoana izao, izay antony lehibe mampiparitaka haingana dia haingana ny valanaretina.
Fiara Gasycar Ho vokarin’ny Gasy’car VIP ?
ny fanambaran’ny filoham-pirenena Malagasy fa hisy ny fananganana orinasa mpamokatra fiarakodia antsoina hoe Gasycar dia nampahatsiahy tantara fohy ny orinasa Gasy’car VIP. 6 taona lasa izay dia nisy mpinamana miisa roa avy any
Fanafihana teny Anosiavaratra Voasokatr’ireo jiolahy ny varavaram-by
Jiolahy miisa folo no indray nandroba sy nanafika mpivady kely monina ao Isahafa Anosiavaratra afaka omaly alatsinainy alina, raha araka ny vaovao azo.
Lehiben’ny Etamazaoron’ny tafika Nitsidika ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato
Nijery ifotony ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato omaly, ny Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika,
Betroka Mpamily iray sy ny zanany lahy lavon’ ny jiolahy
Mpamily iray 50 taona sy ny zanany lahy mbola 19 taona monja no maty novonoin’ny jiolahy efa-dahy. Hihazo aty Antananarivo izy mianaka mpitatitra tantely sy “baie rose” raha niala tany Taolagnaro.
JIRAMA Faktiora 5000 no hahitsy fa nisy diso
Araka ny efa notanterina teto omaly hatrany dia nanambara ny JIRAMA fa nisy ny fahadisoana niniana nataon’ ireo mpiasa 50 izay nahitàna tale roa ka nahatonga iny fiakaran'ny Jiro nihoapampana tsapan'ny mpanjifa teo iny.
Minisitry ny tontolo iainana “Ampiharina ny lalàna, tsy azo ekena ny tsindry”
“Nahomby tanteraka ny fanatontosana ny tetikasa “tolérance 0” izay nanomboka nampiharin’ny ministera ny volana aprily teo,
Tsy fanajana zon’olombelona Naharay fitarainana miisa 297 ny HCDDED
Miisa 297 ireo fitarainana voarain’ny filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna eto Madagasikara ny taona 2019 sy 2020, raha ny tatitra nataon’izy ireo teo anivon’ny antenimierandoholona etsy Anosikely omaly.
Zo maha olona Mitohy ny fizarana kopia ho an’ny ankizy
Zaza 1 amin’ny 2 no tsy manana kopia nahaterahana aty Afrika. Manokatra làlana maro eo amin’ny fiainana ny fananana kopia ary misy mihitsy aza ny zavatra tsy azo hatao raha tsy manana izany toy ny fianarana,
Trafikana lavanila maitso Olona 2 indray no tra-tehaka tany Manakara
Lehilahy 26 taona sy vehivavy 30 taona no voasambotry ny polisy miasa ao Manakara ny 22 jona lasa teo raha nikasa ny hanondrana lavanily maintso tany an-toerana.
Antanetibe Mahazaza Navoaka ny razana fa hotrongisina ny fasana
Nesorina ilay fasan-drazan'olona, ary navoaka tao daholo ny razana satria amboarina ny lalana, ety Antanetibe Mahazaza Ambonirina, hoy ny fitantarana mahakasika ity toe-javatra ity.
Jeneraly Andriankaja Elack - CCO “Tsy maintsy henjanina ny fepetra eto Antananarivo”
Ao anatin’ny tranga vaovao 84 nambara omaly, ny 83 amin’ireo dia eto Antananarivo.
Tranga 84 indray andro Miparitaka aok’izany ny coronavirus
Miisa 84 ny olona vaovao tratry ny coronavirus omaly, ka 1724 ny fitambaran’ny olona rehetra voa nanomboka ny 19 martsa. Fitiliana nataon’ireo laboaratoara miisa telo no nahazoana ireo tranga ireo.
Voka-dratsin’ny coronavirus Tafakatra 100.000 ireo very asa
Mahatratra 100.000 ireo olona very asa vokatry ny fihibohana hatreto eto amintsika. Tsy misy fidiram-bola avokoa izy ireo nefa mamelom-bady aman-janaka, mandoa hofantrano…
Laboratoara LA2M Mahavita fitiliana coronavirus 760 isan’andro
Notokanan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly 23 jona ny LA2M (Laboratoire d’Analyse Médicale de Madagascar) eny Androhibe.
Maorisiana 3 lahy « Négatifs» teny Ivato, « Positifs » tonga tany Maorisy
Mpandeha fiaramanidina niala avy teto Madagasikara, ary tonga tao amin’ny Nosy Maorisy ny sabotsy 20 jona lasa teo no voamarina fa tratry ny coronavirus, raha ny